मान्छे खाने बाघ सिसी क्यामरामा देखियो, पत्ता लाग्यो तनहुँमा बाघले मान्छे खाने कारण (भिडियो) - Naya Pusta
मान्छे खाने बाघ सिसी क्यामरामा देखियो, पत्ता लाग्यो तनहुँमा बाघले मान्छे खाने कारण (भिडियो)
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २६, आईतवार १९:५१
काठमाडौँ । शुक्रबार राती तनहूँ भानु २ की पुष्पा अधिकारीलाई चितुवाले खाएसंगै त्यस क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ। करिब ६ महिना अगाडी मात्र भानु २ कै १० बर्षिय बालकलाई चितुवाले खाएको थियो फेरी ६ महिना पछि यो घटना दोहोरीएको हो । भानु नगरपालीकामा मात्रै ४ जनालाई नरभक्षी चितुवाले खाएको छ।
चितुवाले मानिसको ज्यान लिन थालेपछि बन कार्यालय, नगरपालिका र सम्बन्धीत निकायले सिसी क्यामरा तथा ट्रयाप थाप्दा पनि चितुवा नियन्त्रण गर्न सकेन । मान्छे खाने चितुवा सिसी क्यारामा देखीयो तर पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राबिधिक टोलि असफल भयो।
प्रत्यक्षदर्शीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने मान्छे खाने चितुवा नै सिसी क्यामरामा देखिएको डिभिजन कार्यालय तनहुँका सहायक बन अधिकृत बिजयचन्द्र देबकोटा बताउँछन् ।
पछि एक दिन उक्त चितुवा मरेको फेला पर्यो सबै खुसी भए अब त मान्छे खाने चितुवा छैन तर त्यसको केही महिना नहुँदै फेरी भानु २ मा नै पुष्पा अधिकारीको ज्यान लिएको छ । के सिसी क्यामरामै देखिएको चितुवा हो पुष्पालाई खाने ? हेर्नुहोस् भिडियो :
यो पनि पढ्नुहोस् : साझा पार्टी कास्कीमा खनाल, महानगर संयोजकमा गुरुङ चयन
सावधान ! यी ५ कुरा बढी खाए हुन सक्छ क्यान्सर